Kubhekwe uMngqithi asayine kwiSundowns
UMANQOBA Mngqithi osenesifiso sokuqhubeka nokuqeqesha kwiMamelodi Sundowns Isithombe: BACKPAGEPIX
NHLANHLA SITHOLE | May 24, 2020
KUNGENZEKA kulandele iphini lomqeqeshi kwiMamelodi Sundowns, uManqoba Mngqithi, ukuthi azibophezele ngokusayina isivumelwano sokuqhubeka nokuhlala eminye iminyaka eqenjini laseChloorkop.
Lokhu kungenzeka emuva kokuthi ngoLwesine, umengameli waleli qembu uPatrice Motsepe, ememezele ukuvuselelwa kwefindo lomshado eminye iminyaka emine nomqeqeshi walo, uPitso “Jingles” Mosimane.
Emuva kwalesi simemezelo, Isolezwe ngeSonto libe selithinta imenenja kaMngqithi, uMike Makaab, ngokuthi ngabe limi kanjani ikusasa lakhe eChloorkop nephendule yathi: “Izingxoxo ngokuvuselela kukaManqoba sezihambe ibanga elide, ngakho akusekude siyiphethe imbenge njengoba sekumenyezelwe uPitso ngokumsethethweni.”
Ethintwa uMngqithi, uthe akukho angakusho ngesivumelwano esisha ngoba konke kusezandleni zemenenja yakhe kodwa angathanda ukuqhubeka nokusebenza kwiSundowns.
“Ngingajabula ukuthola elinye ithuba kwiSundowns ngoba nami nginesifiso sokuthi uma ithola inkanyezi yesibili, nami ngibe ngiyingxenye yayo. Phela uma ukwiSundowns, akukho okunye okungathokozisa umengemali (Patrice Motsepe) ngaphandle kwayo. Ngendlela izinto ezenziwa ngayo kuleli qembu, njalo uhlale uphokophelele okungcono,” kusho uMngqithi naye okungenzeka kuvuselelwe ngeminye iminyaka emine.
UMosimane, obebukeka ehlukile kunendlela eyejwayelekile ngenxa yokushiya intshebe, emuva kokuthi emenyezelwe, ube esezibozephela ngokuthi uzosebenzela ukulanda inkanyezi yesibili.
“Ngizizwa ngihloniphekile ukuthi ngiphinde ngethenjwe ngokuthi ngiqhubeke nokuhola iqembu elikhulu njengeSundowns.
“Okungenze ngavuselela neSundowns, kungenxa yokukhonjiswa ukungethemba kukamengameli weqembu ngokuthi anginikeze ithuba lokuthi ngingakwazi ukufeza iphupho lakhe lokubumba iqembu elizonqoba i-Afrika. Nokuthi umuntu uzizwa ethobekile ukuthi abe yingxenye yeqembu elinjengeSundowns nokufaka igxalaba empumelelweni yalo,” kubeka uMosimane.
Uphinde waveza ukuthi ngaphandle kokuthi uma ukwiSundowns, ngaso sonke isikhathi kunezinselelo zokuthi uhlale unqoba.
“Ngifuna ukuthi nginqobe indebe yeMTN8 okuyiyona kuphela indebe engingakayinqobi neSundowns, siqhubeke nokunqoba izindebe kanye nenkanyezi yesibili, mengameli ngiyakwethembisa,” kubeka uMosimane osechithe iminyaka eyisikhombisa nesigamu kuleli qembu ezibongela kuMotsepe.